Mpanamboatra sy Orinasa tsara indrindra UV-Plasma Automatic Disinfection Machine | Judphone
Masinina Fanadiovana Matsilo
UV-Plasma automatique desinfection machine
●Fanadiovana haingana, 30㎡ in 12 minitra
●Fanadiovan-drivotra, ambonin'ny tany ary tany 99.9999%
●Uvc-LED ny famonoana otrikaretina ny tany sy ny kodiarana
●Module desinfection Plasma, mahatratra bacteriostasis sy fiarovana maro
●Fiara jiro amalgam avo lenta, hamafin'ny hazavana ambony indrindra 4000μW/cm2 amin'ny 1m
●Full Automatic & Intelligent Control
Fanadiovana haingana.Fanatanterahana ny fanadiovana ny efitrano 30nf ao anatin'ny 8 minitra. Ny fahafahan'ny bakteria dia mahatratra 99.99%O
AFreely retractable.Aorian'ny milina famonoana otrikaretina tsy manatanteraka ny asa famonoana otrikaretina na mamita ny asa, ny milina dia hitondra ny fiarovana rafitra mba hihodina, ka ny jiro rehetra dia azo ahodina ao amin'ny vatana robot mba hiarovana ny jiro ultraviolet.
Aultra-mangina Rehefa mandeha ho azy ny disinfector dia latsaky ny 35dB ny decibel miasa.
ensor.Equipped amin'ny 5 velona detects sensors, ny UV disinfection milina, eo amin'ny dingana ny disinfection, dia afaka hamantatra ny olona na ny biby ao amin'ny disinfection isan-karazany, avy eo dia mampiato avy hatrany ny disinfection, ary vonoy ny taratra ultraviolet, mba hisorohana ny loza amin'ny olona na biby.
Asafety design.Misy bokotra fiatoana vonjy maika (EMO) na eo an-tampony sy eo amin'ny chassis, izay azo ampiasaina hanapaka ny hery miasa amin'ny fanjakana maika. Misy jiro jiro ultraviolet eo ambanin'ny efijery fikasihana eo an-tampony. Rehefa tsindriana dia azo tapahana ny jiro ultraviolet mba hikolokoloana sy hiasa.
Asuper fiaretana, dia afaka mahatsapa ny efitra fandripahana ny tokony ho 350 m2 ho an'ny fiampangana tokana.Fomba famandrihana roa: famandrihana automatique sy manual. Famahana ny olana momba ny faharetan'ny milina.
AMulti-disinfection.Misy 8 avo-intensity UVC-LED disinfection jiro eo amin'ny farany ambany ny disinfection milina, izay afaka mahatsapa multi-disinfection amin'ny tany sy ny kodiarana ny milina. Miaraka amin'ny maodely famonoana otrikaretina plasma, dia afaka mahatratra bacteriostasis mitohy sy fiarovana maro eo ambanin'ny fiaraha-monina ny olombelona sy ny milina.
Alntelligent contro Pad fanaraha-maso, Afaka manao fitantanana fahefana, fandidiana robot, firaketana an-tsoratra ny disinfection tahirin-kevitra, tatitra Output sy ny asa hafa.
Ny vokatra famonoana otrikaretina taratra UVC dia matetika ampiasaina amin'ny famonoana rivotra (Virus, bakteria, na holatra dia mety hiparitaka eny amin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny fofonaina, firesahana, kohaka, sneezing, vovoka, na hetsika rehetra izay mamokatra aerosol solid na ranon-javatra. Ny hafanana, ny rivotra ary ny rivotra Ny rafi-pandrefesana dia hitarika amin'ny fiparitahan'ny bakteria eny amin'ny rivotra, izay toerana lehibe amin'ny famonoana otrikaretina, ny famonoana otrikaretina ety ambonin'ny tany (Ny rora sy ny vongan-drano dia vokarina rehefa mikohaka na mifoka rivotra ny olona, ​​​​ny ankamaroany dia mianjera amin'ny faritra manodidina sy zavatra, toy ny latabatra na Raha mitondra viriosy izy ireo, dia mety ho voan'ny aretina ny mpiasa amin'ny fikasihan-tanana na zavatra voapoizina ary avy eo mikasika ny maso, sofina, vava ary orona), ary ny famonoana otrikaretina zavatra (ny viriosy dia afaka mivelona amin'ny eny ambonin'ny zavatra mandritra ny 5 andro, ary noho izany dia mety ho voan'ny aretina. Ny otrikaretina dia avo kokoa rehefa mifandray amin'ny zavatra ilaina andavanandro na fitaovana ifampizarana. Ny famonoana tsy tapaka ireo lahatsoratra isan'andro sy ampiasaina indray dia afaka manampy amin'ny fampiatoana ny viriosy sy ny bakteria eo amin'ny sehatry ny zavatra). Ny OMS mitatitra fa tsy mbola hita hatreto ny mikraoba misy fanoherana taratra UV-C. Miorina amin'ny taratra ultraviolet UV-C avo lenta sy robot mobile autonomous, ary koa miaraka amin'ny teknolojian'ny plasma, robot famonoana otrikaretina UV-Plasma (AUVP1) haingana ho noforonina. Ity antontan-taratasy ity dia mampiditra indrindra ny fepetra R&D ara-teknika amin'ny robot famonoana otrikaretina amin'ny fanombohan'ity tetikasa ity.
Jiro UV-C 1.207W x 10 cps
2.High-intensity amalgam lamp array, miaraka amin'ny fandrakofana midadasika ny hamafin'ny mahomby.
3. Ny haavon'ny jiro ambony indrindra amin'ny 4000 μW / cm2 amin'ny 1m.
4. Famenoana ny fanadiovana ny efitrano 30㎡ ao anatin'ny 12 minitra.
5. Ny vokatry ny disinfection dia voamarina avy amin'ny andrim-panadinana antoko fahatelo.
6. Freely retractable jiro fiarovana famolavolana sy mety jiro disassembly.
7. Rehefa tsy manatanteraka ny asa famonoana otrikaretina na mamita ny asa ny milina famonoana otrikaretina, dia handroaka ny rafitra fiarovana amin'ny fihodinana ny milina, mba hahafahan'ny jiro rehetra mihodina ao amin'ny vatan'ny robot mba hiarovana ny jiro ultraviolet.
8. Chassis finday mandeha ho azy, mangina, mahery, ary azo antoka.
9. Ny chassis ny milina famonoana otrikaretina dia afaka mahatsapa ny fitetezana tsy miankina sy ny fisorohana ny sakana, ny mandeha an-tongotra ao amin'ny efitrano mba ho voadio.
10. Rehefa mandeha ho azy ny disinfector dia latsaky ny 35dB ny decibel miasa.
11. Multi-sensors ho fiarovana fiarovana.
12. Dingana kely mankany amin'ny famonoana otrikaretina hendry.
13. Ultrasonic module sensor, halalin'ny fakan-tsary sensor, tamin'ny laser radara, ary fiarovana amin'ny sisiny sensor.
14. Live sensor, mifantoka amin'ny fiarovana ny disinfection dingana amin'ny fotoana rehetra.
15. Equipped amin'ny 5 velona detection sensors, ny UV disinfection milina, eo amin'ny dingana ny disinfection, dia afaka hamantatra ny olona na ny biby ho any amin'ny disinfection isan-karazany, avy eo dia mampiato avy hatrany ny otrikaretina izy, ary vonoy ny taratra ultraviolet, mba hisorohana ny loza ho an'ny olona na biby.
16. Safe sy ubiquitous famolavolana.
17. Misy bokotra fiatoana vonjy maika (EMO) na eo amin'ny tampony sy ny chassis, izay azo ampiasaina hanapaka ny hery miasa amin'ny fanjakana maika.
18. Misy jiro jiro ultraviolet eo ambanin'ny efijery mikasika ny ambony. Rehefa tsindriana dia azo tapahana ny jiro ultraviolet mba hikolokoloana sy hiasa.
19. Miaraka amin'ny hery mahery vaika sy ny fiaretana mahery vaika, ny famonoana otrikaretina mitohy mandritra ny 2 ora dia azo tanterahina amin'ny fiampangana tokana.
20. Equipped amin'ny 48V90AH super-capacity lithium bateria, dia afaka mahatsapa ny efitra fandripahana eo amin'ny 350㎡ ho iray fiampangana. Mahafeno ny filàn'ny ankamaroan'ny mpanjifa ny famonoana bibikely tokana.
21. Fomba fiampangana roa: famandrihana mandeha ho azy sy manual. Famahana ny olana momba ny faharetan'ny milina.
22. Multi-disinfection, ary fiarovana rehetra.
23. Misy 8 avo lenta UVC-LED disinfection jiro eo amin'ny farany ambany ny disinfection milina, izay afaka mahatsapa multi-disinfection amin'ny tany sy ny kodiarana ny milina.
24. Equipped amin'ny plasma disinfection Module, dia afaka hahatratra bacteriostasis mitohy sy ny fiarovana maro eo ambanin'ny fiaraha-monina ny olombelona sy ny milina.
25. Fanaraha-maso intelligent, mandeha-araka ny-nao-azafady.
Fanaraha-maso Pad 26.8-inch, ary famolavolana APP tonga lafatra. Izy io dia afaka manatanteraka ny fitantanana ny fahefana, ny fiasan'ny robot, ny firaketana an-tsoratra ny angon-drakitra famonoana otrikaretina, ny famoahana tatitra ary ny asa hafa.
Tarika ultraviolet Ny sterilization amin'ny taratra ultraviolet amin'ny halavan'ny onjam-peo 254nm dia afaka manapaka tsara ny ADN na ARN amin'ny mikraoba, ary manakana ny fahaterahana indray, mba hahatratrarana ny disinfection sy ny sterilization.
Chassis disinfection Misy jiro fanamafisam-peo UVC-LED mahery vaika maromaro eo amin'ny farany ambany amin'ny milina famonoana bibikely, izay afaka mahatsapa fandripahana marobe amin'ny tany sy ny kodiaran'ny milina.
Fahaiza-manao sterilization Fanadiovan-drivotra 99.9999%, fanadiovan-drivotra 99.9999%, ary fanadiovan-tany 99.9999%.
Fomba famonoana otrikaretina Jiro sterilization 10 mahery. Ny famonoana azy ho azy dia afaka mahatratra 360 ° ny fandrakofana feno tsy misy aloka, miantoka ny famonoana otrikaretina avo lenta amin'ny tontolo iainana.
Hafainganam-pandrefesana Miaraka amin'ny famonosana mahery vaika sy haingana dia afaka mamita ny famonoana ny efitrano 30㎡ ao anatin'ny 12 minitra.
Famatsiana herinaratra bateria Lithium, miaraka amin'ny famonoana otrikaretina mitohy mandritra ny 2 ora amin'ny fiampangana tokana.
Mifandray amin'ny fiarovana Raha vao hita ny zavamananaina velona ao amin'ny faritra famonoana otrikaretina dia hatsahatra ny famonoana otrikaretina.
Ny robot dia manana sensor, ao anatin'izany ny sensor module ultrasonic, sensor fakantsary lalina, radar laser, ary sensor sisiny amin'ny fiarovana.
Safidy fiarovana maromaro
Ny jiro dia azo tehirizina ho azy mba hisorohana ny fiantraikany ivelany.
Multi-level jiro fanaraha-maso switch
hetsika Fanaraha-maso pad
Hopitaly: efitrano fandidiana, efitrano fakan-kevitra, efitrano fanerena ratsy, efitrano fisoloana zava-mahadomelina, sns.
teo aloha: Robot famonoana otrikaretina, AD10 TSY MISY Mitifitra Robot famonoana otrikaretina miaraka amin'ny fiampangana tena ho an'ny tsenan'ny tsenan'ny trano fisakafoanana amin'ny hopitaly.
Manaraka: Sivana karbônina activated honeycomb
Robot famonoana otrikaretina atomizing
Robot fanadiovana mandeha ho azy
Rafitra famonoana otrikaretina mandeha ho azy
Masinina famonoana otrikaretina
Rafitra famonoana otrikaretina UV ho an'ny hopitaly
Uv-Plasma Masinina famonoana otrikaretina mandeha ho azy
AD10 maina zavona hydrogène peroxyde Intelligent Disi ...
Plasma amin'ny hafanana ambany fanadiovan-drivotra mavitrika ...
ADM02 Portable Atomizing Hydrogène Peroxyde Inte...
AD10S maina zavona hydrogène peroxyde-Plasma Intellig ...
Robot desinfection, AD10 TSY MISY Mitifitra Disinfect...
AM1 Portable atomizing sterilize parameter